Bachelor nri abalị Christmas | Martech Zone
Monday, December 25, 2006 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ezi enyi m, Derek, na-eziga ozi-e, na-akpọ ma na-ezigara m ozi ụbọchị niile iji napụta m n'aka m Bachelor nri abalị Christmas. Nwunye ya, bụ Anne, bụ ezigbo nri esi nri… gourmet cook. Ha choro ka m bia taa (ugbua) ka ha na ezin ul o ha rie nri. Ekeresimesi bụ ụbọchị maka ezinụlọ, ọ na-abụkarị m na-atọ ọchị ịnọdụ ala soro ezinụlọ ọzọ mebie achịcha. Agbanyeghi na ha na akpo oku (Ana m eche ndi uwe ojii ka ha bia obula oge), ahoro m nri anyasi.
Maka ekele, ụmụ m ji m mee ihe ọchị, “Olee ụdị Pizza anyị ga-eri?” Ọ bụ naanị mkpali m chọrọ ịme nri abalị ekele dị egwu. Anyị nwere ọrụ! Turkey, nri, poteto, gravy, ugu achịcha, na-apụta, wdg Ihe niile wee zuru okè - na ọbụna toki bụ ịrịba - a nnọọ ooh Butterball.
Ugbu a ọ bụ ekeresimesi na ụmụ m nọ n’ụlọ mama ha. Oge eruola maka Bachelor nri abalị Christmas!
Na 3AM nke ụtụtụ a, ka m na-enyocha ebe a na-ere ọgwụ elekere 24, achọtara m Bachelor nri abalị Christmas:
Lay's Cheddar na Sour Cream Potato Chips… nke ahụ dị mma, ha na-etinye itinye na ibe ka ị gaghị egbusi oge ịmịnye. Ha nọ na-ere! Zụta 1 nweta 1 n'efu.
2 Mkpọ nke Stebell Grill Steak Chunky Chili. Ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ kachasị mma!
2 Mkpọ Generic Diet oroma gbaziri n'aka onye agbata obi m (ana m anọdụ n'ụlọ nwamba ya 3)
Na Ọzara? Ezigbo sịga ACID Blondie. (Ahuru ya na zip zip n’elu oche m… o zuru oke)
Esere m foto iji chekwaa ebe nchekwa n'oge:
Unu nwere ike iche na m na-agba ara m ịhapụ nri gourmet maka nke a… mana tinye tebụl telivishọn, ndị ọkpọ na ndị ọbịa pụrụ iche na Channel Channel, anyị nwere ezigbo, ezigbo ekeresimesi maka Doug!
Adịkwa Onye ọ bụla!
Dec 25, 2006 na 4:36 PM
Dec 25, 2006 na 7:03 PM
lol… nke ahụ bụ nri ebe ahụ Doug. Ana m eme naanị otu ihe n'afọ a, mana ọ dị m ka m nwere obere nduku na ọkụkọ kama. Ndị ibe anya ike ọma,… Achọrọ m ụfọdụ.
PS Enwere ụzọ isi tinye atụmatụ, yabụ usoro ahụ na-echeta m nleta ọ bụla? Adịghị m onye na-achọgharịgharị ozi m oge ọ bụla. Daalụ.
Dec 25, 2006 na 10:42 PM
Daalụ maka ikwu n'abalị ụnyaahụ. M ga-enwe mmasị na-enyere gị beta nwalee ngwaahịa mgbe ị dị njikere. Daalụ ọzọ maka ikwu.
Dee 26, 2006 na 2: 54 AM
Nke ahụ jọgburu onwe ya!
Ma kpamkpam dị egwu n'otu oge!
Dee 26, 2006 na 7: 35 AM
Oh, m nwetara ya, ị zaghị ma ọ bụ weghachite oku m! 🙂
MERRY Christmas Christmas enyi !!!
PS - Nri abalị gị bụ LAME (bachelor ọ bụla maara na Pizza Rolls bụ ezigbo enyi mmadụ)!
Dec 26, 2006 na 12:05 PM
Ikwesiri ịga saịtị m ugbu a wee hụ ihe ga - eme mgbe mmadụ tụrụ anya ịhụ Doug na nri abalị ekeresimesi. http://www.drumminguy.com/?p=195
Dec 26, 2006 na 3:55 PM
Aga m agagharị Bill otu ka mma - nke ahụ dị egwu !!
Oge ọzọ ịnabata òkù ndị enyi gị - ezigbo nri, mmanya dị mma, (ma eleghị anya ezigbo sịga) na mkparịta ụka dị mma - ihe niile eji eri nri zuru oke.
Dec 27, 2006 na 3:15 PM
Just pụọghị n'ihi na Derek bụ ezigbo dork. O nwekwara nje ndị ahụ akwụkwọ akụkọ… Ikwesighi ịgọpụ. Ekwenyesiri m ike na mgbe anyị risịrị nri a, ọ na-enwe obi ụtọ na ị gaghị agafe MGBE.